Toeram-pisakafoanana aorian'ny fiofanana
Home » Blog » Trano fisakafoanana aorian'ny fampiofanana
Trano fisakafoanana aorian'ny fampiofanana
Ny fanazaran-tena sy ny fikarakarana dia lafiny manan-danja amin'ny fitazomana azy tsara sy hijanona ho salama. Na izany aza, ny fampiofanana tsy tapaka sy hentitra dia mety handreraka, ary handao anao amin'ny alahelo sy ny fangirifiriana. Midika izany fa, raha ny marina, ny fihavaozana dia mety ho manan-danja toy ny fampiasana azy; mba faran'izay betsaka ny fahombiazan'ny fanarenana anao, ny asa dia mila entina avy hatrany. Na izany aza, misy zavatra maro samihafa azonao atao amin'io lafiny io, toy ny fampiasana fanafody, fametahana, ary fihinanana sakafo tsara, dia ho mifantoka momba ny tombontsoa azo amin'ny fampiasana toeram-pamokarana post-workout.
Voalohany aloha, ny fampiasana trano fisotroana dia mampihena ny fihenjanana sy ny reraka ao amin'ny hozatrao; Aorian'izany dia mampidina herim-po sy adin-tsaina izy io. Ny fiasan'ny vatanao ao amin'ny efitrano fandroana dia mampitombo ny fantson-drao (manitatra). Ny famonoana ny fantson-dra dia miteraka fanatsarana ny rà manodidina ny vatanao. Izany, ho setrin'izany, dia midika fa ny hozatry ny hozatra dia manome oksizenina sy sakafo mahavelona bebe kokoa, manampy amin'ny fanamboarana mozika. Izy io koa dia manampy amin'ny fanesorana haingana ny vokatra azo avy amin'ny fihenan'ny hery miasa mafy, ary koa ny cellules ho an'ny valin'ny immunité. Ireo sela fotsy fotsy ireo dia ilaina hamongorana ireo sela hafa tsy mety voatsinjara (sy ny fako) saingy mety hanimba ireo sela salama raha misy mandritra ny fotoana maharitra.
Ankoatra ny fanalefahana ny fahantrana sy ny fampivoarana ny tahan'ny fitehirizana, ny fampiasana toeram-pokonolona dia mampitombo ny fiovan'ny vatanao. Indray, ity dia fihetsika voajanahary ho an'ny fampiakarana ny vatanao. Rehefa vita ny fanatontosana, dia mihamitombo ny tahan'ny metabolika amin'ny vatanao mandritra ny ora vitsivitsy manaraka. Midika izany fa, amin'ny ankapobeny, mandoro angovo (kalorie) haingana kokoa amin'ny toeram-pitsangatsanganana ianao raha oharina amin'ny ankapobeny. Ny fandaharam-potoan'ny diplaoma mandritra ny efitrano fianarana dia afaka manitatra ny halavan'ny fotoana izay mbola mijanona ao anatin'ity toe-javatra mihamitombo ny metabolismao ity. izany mampakatra faran'izay avo ny fahombiazan'ny fanatsarana ny metabolika ary indrindra indrindra raha ny tanjon'ny fampiharana dia ny manjary mavesatra.
Ho an'ireo izay manao fampihetseham-potoana mangatsiaka, indrindra indrindra amin'izao vanim-potoana izao, amin'ny fampiasana efitrano fandroana dia mety hisy tombony sasany mety tsy hoeritreretinao. Ireo efitrano fitahirizana dia manampy amin'ny fampihenana ny fihoaram-pefy ary hanamaivana kohaka, vokatra ratsy amin'ny tsy fampiasana (indrindra amin'ny ririnina). Ny fimamoana amin'ny tendany, na ny fahatsapana "mirehitra", dia fisehoan-javatra mahazatra ihany koa. Na izany aza, mifanohitra amin'ny finoana malaza fa tsy vokatry ny hafanana mangatsiaka ny rivotra, fa vokatry ny tsy fahampian-tsakafo. Ny fampiasana efitrano fandroana dia manampy amin'ny fanamaivanana izany tsy fahampian-tsakafo izany, ary tsy mahazo aina. Izany dia miankina amin'ny haavon'ny hafanana eo amin'ny toeran'ny efitrano fandroana, ary ny fiverimberenan'ny hoditra maina ao amin'ny tendany. Ireo soritr'aretina mahatsiravina dia ho tsara kokoa Fantatra amin'ireo izay manana asthma, izay midika ho fampiasana ny efitrano fandroana amin'ny fampiasana fantsom-panafatra.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny seha-pamokarana dia ny manampy amin'ny fifehezana ny vatana. Ankehitriny, raha marina izany, amin'ny fampiasana efitrano fandroana dia tsy hanaisotra ny vatan'ny toaka misy ankehitriny. Ny efitrano fandroana dia hanampy amin'ny fanafoanana ireo singa mpitsidika (Kely kokoa noho ny 1%) ny toaka avy amin'ny vatanao. Na izany aza, ny fivorian'ny efitra fivarotana dia manampy betsaka amin'ny fanesorana ny hoditra, ary manadio azy amin'ny fahalotoana. Ny famonoana dia iray amin'ny fomba voajanaharinao amin'ny vatanao amin'ny fanadiovana azy amin'ny toaka, mandritra ny fanatanjahan-tena dia ny fomba fanalefahana ny hatsembohana; Satria voatery mivoaka avy ao amin'ny vatana ireo poizina ireo, fa miorina eo amin'ny hoditra rehefa maina. Ny hafanana sy ny hamandoana ao amin'ny efitrano fandroana dia tsy mamela ny hatsembohana ho maina, manatanteraka ny fanadiovana ny hoditra. Izany koa dia ny fanavaozana ny hoditra, ary afaka manampy amin'ny fampivoarana ireo olana matihanina rehetra mety ho azonao.
Farany, ny fampiasana efitrano fandroana dia mahatonga ny hyperthermia amin'ny fampiakarana ny vatanao. Hyperthermia dia fomba mahomby hamonoana ny vatana hafa zavamananaina izay mety ho eo amin'ny vatanao; satria tsy afaka ny ho tafavoaka velona amin'ny hafanana be loatra izy ireo. Ohatra, rehefa manana tazo ianao dia manangona ny hafanany ny vatana mba hiadiana amin'ilay aretina. Efa nanohina ny valintenin'ny autoimmune nateraky ny fanatanjahantena, izay midika fa ny vatana dia efa 'miady' ho salama araka izay tratra. Noho izany ny fampiasana efitrano fandroana aorian'ny fivoahana dia hampihena ny fahafahanao hianjadian'ny aretina, na dia tsy manafoana ny fisian'ny vatana hafa rehetra aza izany.
Ity lahatsoratra ity dia natolotr'i Sam Socorro avy amin'ny Spacious senses. Sam dia mpanoratra manam-pahaizana momba ny fahasalamana sy ny fanatanjahan-tena ary nanoratra sy nianatra lohahevitra toy ity ity ity nandritra ny 10 taona.
Febroary 24, 2017 FitnessRebates Blog Tsy asian-teny